शब्दकोश: सरुभक्तको चुली र ‘धुम थ्री’
सानो आकारको किताब भए पनि फारो गर्दै बिसाउँदै पढ्ने मेरो बानी र समस्या दुवै हो । एक त पढ्नलाई एकोहोरो समय नमिल्ने । अर्को, समय मिले पनि एउटै लामो आलेख त्यसरी एकोहोरो सिलसिलेवर रुपमा पढ्न जाँगर र धैर्य नहुने । यसैले पढ्न बिसाएको बीचको समयमा ‘धुम थ्री’ फिल्म हेरेँ । हलमा विशेष रोजाइको फिल्म हेर्न मात्रै जाने गर्छु । यसैले कमै बढी मसालेदार फिल्म भन्दै हेर्नुपर्ने सूचीमा राखेको थिइनँ यो फिल्मलाई । टोरन्टबाट राम्रो प्रिन्ट डाउनलोड भएपछि भने आमिर खान अभिनीत फिल्म हेर्ने मन भयो । नामअनुसार नै प्रविधिको धुमधधडाका प्रयोग गरिएको फिल्ममा आमिरको अभिनय तारिफयोग्य लाग्यो । कथावस्तु यथार्थभन्दा निकै पर भए पनि पात्रको चरित्रचित्रण र आवेग प्रभावशाली लाग्यो । पढ्दै गरेको उपन्यासको प्रभाव मगजमा रहेकाले होला, फिल्मको पात्र पनि आफ्नो उद्देश्यमा कटिबद्ध पर्वतारोही जस्तै पाएँ ।
अमेरिकाको सिकागो सहरमा सर्कस चलाउने एक भारतीय जादुगर, जसले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि पलपलको तनावभन्दा आत्महत्याको बाटो रोज्छ । ऋणको मूल्य बाबुको मृत्युले चुकाउनुपर्दा इखालु बनेका दुई छोराले त्यो बैंक तहसनहस पार्ने अठोटसहित गरेका लुटपाट र अनेक कर्मकाण्ड नै फिल्मको मुटु हो, जुन हर्कत गलत नै किन नहोस् ! बैंक बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा ती दाजुभाइले आफ्नो जीवनको पूर्णता भेट्छन् । मान्छेले सामाजिक असन्तुलनका कारण टुटेको आफ्नो मन जोड्ने प्रयास स्वरुप कानुन तोड्छ भन्ने भाव दर्शाउँछ फिल्मले । शक्तिशालीले निर्धालाई दुःख दिने ‘संस्कृति’ र सिस्टमका नाममा संसार संवेदनाशून्य हुँदै गएको तीतोपनसँग पनि फिल्मले साक्षात्कार गराइदिएको छ ।
अब फेरि किताबकै प्रसंग ।
२९,०२८ फिट अर्थात् ८,८४८ मिटरको उँचाइमा पुग्न आरोही अथक योद्धा बन्नुको पछाडि तिलस्मी कारण छ । किताबमा त्यो कारण त्यस्तो प्रगाढ रुपले त देखा पर्दैन । तर भावनाको आँखीझ्यालबाट हेर्दा थाहा लाग्छन, उसलाई प्रेमले डोर्‍याएर, काँध थापेर चुचुरोतिर लगेको छ । उसमा यति धेरै साहस भर्ने, अठोटले उजिल्याउने र लगनशील बनाउने उसको प्रेमिकाप्रतिको प्रेमले हो । जुन प्रेमको सार्थकता र पूर्णता ऊ आफूले सगरमाथा चुम्दा मात्रै सिद्ध हुने ठान्छ । प्रेमिकालाई सफल आरोहणको उपहार दिनु उसले महान् प्राप्ति सोचेको छ ।
आरोहणका क्रममा ऊ ठाडो बाटोमा यसअघि अरु नै आरोहीले बाँधिराखेको डोरी समात्दैन । आफैंले लगेको डोरीले भर्जिन यात्रा गर्छ । ‘आफ्नो बाटो आफैं बना । आफ्नो चुली आफैं बन् ।’ भन्ने चेतनाले भरिएको छ ऊ । कहिले ऊ हिपहिरोले थिचिन्छ, कहिले हिमचट्टानबाट चिप्लिएर तल बजारिन्छ, कहिले हावाको वेगले कागजको डल्लो मिल्काए झैं हिमतुफानले हुत्तिन्छ, कहिले घस्रिन्छ घाइते सर्प जस्तै । कसैगरी लक्ष्य टिप्नु छ भने मृत्युसँग पनि प्रतिस्पर्धामा हुन्छ मान्छे । छापामार यौद्धा जसरी हरेक उपाय अपनाउँदै गाह्रोसाह्रो छिचोल्दै अन्ततः ऊ बाटै बन्द भएको ठाउँमा पुग्छ । अर्थात् सर्वोच्च शिखरको चुम्बन !
विजयको सन्तुलित खुसी मनाउँदै ऊ प्रेमको इतिहास बनाएर चुलीबाट फर्कने क्रममा जुट्छ । ऊ सजग छ, चढ्नु जति नै ओर्लनु पनि चुनौतीपूर्ण मानिने हिमालमा अधिकांश दुर्घटना ओर्लने क्रममा हुन्छ । तर जीवनमा हरेक सजगता र सावधानी कामलाग्दो बन्छ त ? गरिएको तयारी काफी हुन्छ यात्रा तय गर्न ? चुलीबाट ओर्लने क्रममा पनि ऊ हिमतुफानको चपेटामा पर्छ । परिस्थिति सधैं अनुकूल हुँदैन । प्रकृतिले अँगालो फाट्ने गरी दिएको कुरा केही बाँकी नरहने गरी निमेषभरमै खोस्छ पनि । जीवन भेटिरहेको पैंतालाले एउटा मोडमा लय गुमाउँछ । आरोहीलाई भयानक हिमतुफानले उचालेर बजार्दा उसको मृत्यु हुन्छ । तर, ऊ मान्छेका अहम् र संघर्षको यात्रा यसपछि पनि चलिरहने भन्दै मानव र मानवताको अनन्त सिलसिलातर्फ संकेत गर्छ ।
हिमालसम्बन्धी आख्यान हाम्रो साहित्यमा यति सघन रुपले आएको सम्भवतः यही पहिलो हो । साहित्यकार सरुभक्तले हिमाल जत्तिकै महान् साहित्यले गर्वको गाथामा एटा स्वर मिसाएका छन् ।
किताबभित्रका केही मार्मिक पंक्ति :
- ‘जीवनका जति अभिशाप आइपरे पनि जीवन अभिशाप होइन ।’
- ‘मान्छेको इतिहास भनेको प्रकृतिसित सम्झौताको इतिहास होइन । मान्छे एक साहस हो । ‘
- ‘हिमालको महत्व नबुझ्नेहरु सजिलो हिमालको खोजीमा लाग्छन् । हिमालहरु कहिल्यै सजिला हुँदैनन् । यो त अल्छीको दिवास्वप्न मात्रै हो ।’
- ‘जीवनको एउटा महान् सत्य के पनि हो भने जीवन एउटा मात्र चुलीका लागि होइन, धेरैधेरै चुलीका लागि हो । जीवनका सगरमाथाहरु धेरै हुन्छ । धेरैधेरै । धेरैधेरै ।’
- ‘दुर्घटनाहरुसित लुकामारी खेल्नुको नाम नै हो जीवन ।’
- ‘विजयमा खुसी हुनुपर्छ, सफलतामा खुसी हुनुपर्छ तर चाहिनेभन्दा बढी होइन ।'
- ‘मान्छेहरुले जीवनको बाटो उक्लँदा ओर्लने क्षमता सुरक्षित पारी राख्दैनन् ।’
- हिमाल चढ्नु भनेको ओर्लनु पनि हो । चुली टेक्नु भनेको आधा विजय पाउनु हो ।
- ‘पृथ्वीको इतिहासमा एक युगमा एकदुई जनाले मात्र मानवताको चुली टेके भने मुक्तिका लागि मान्छेले ईश्वर कल्पना गरिराख्नु पर्दैन ।’
Posted by Jotare Dhaiba at Sunday, June 08, 2014